जान्नुहोस्, भगवान मध्येमा सबैभन्दा ठुला को हुन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
जान्नुहोस्, भगवान मध्येमा सबैभन्दा ठुला को हुन् ?
एजेन्सी । तपाई, हामी सबैजनाले भगवानप्रति विश्वास र आस्था राख्छौं । भगवान ठुला हुन्, भनेर सबैले मान्ने पनि गर्दछौं । तर हाम्रो मनमा कहिलेकाही सबै भन्दा ठुला भगवान को हुन् ? वा सबैभन्दा बुद्धिमान को हुन् ? भन्ने आउँछ ।
आज हामी यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौ । हिन्दु धर्म अनुसार तिनै एकै भगवान मानिन्छ । ब्रम्हा परआत्मा र भगवान यी तीन शब्दलाई पुराण शास्त्रमा प्रयोग गरिएको छ । सबै लेखकका सांरास भगवानको सबै अवतार एकै हुन् र उनीहरुमा कुनै अन्तर छैन ।
अस्तु, राम र कृष्ण एक हुन भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ भगवानहरुका नाम मात्रै फरक हुन् भनेर सोच्नु पर्छ । ब्रह्मा विष्णु शंकर सीता राधा लक्ष्मी सरस्वती यी सबै एक हुन् र लीलामा भगवानले आफ्नो २/४ रुप बनाएका हुन् । तर वास्तवमा यी मानिस एउटै हुन् ।
नारदले भक्ति सुत्रमा व्याख्या गरेका छन्, ‘भक्त र भगवानमा अन्तर हुन सक्दैन ।’ यसैले भगवानका अवतार सबै समान हुन् । भगवानको बारेमा सानो ठुलो सोच्नु हुंदैन । Naya Pusta